Iqhawe leMasters lifumana iJack Jacket yendabuko kwimpumelelo yokuphumelela emva kokuphumelela kwakhe. Kodwa ngaba iqhawe leMasters lifumana ukugcina iGreen Jacket?
Impendulo ngu "Ewe ... kunye nohlobo."
Masters Champs Gcina iJacket ebomvu yonyaka owodwa
Ngentsasa emva kokuba uPhil Mickelson anqobe iMasters ka - 2010 , wagxotha kwi-drive-through kwi-Krispy Kreme e-Augusta, eGa., Abantwana kwi-tow, ukuthabatha intsapho yama-morning.
Kwaye wayegqoke iGreen Jacket. Isithomo seKrispy Kreme kwabasebenzi sithatha i-viral.
UMickelson wayenombuso wokukhulula ukugqoka iJack Jacket yakhe apho wayekuthanda khona kunyaka olandelayo. Bonke abaphumeleleyo beMasters Tournament bafumana iJacket yaseGreen ngonyaka owodwa, bawuthathe ekhaya nabo-bathathe apho bafuna khona kulo nyaka.
Kodwa: Xa ukukhusela isiza kubuyela kwi- Augusta kaZwelonke kunyaka olandelayo, ubuyisela ibhatyi yakhe kwiqela.
Emva konyaka, iJack Jacket ihlala ku-Augusta kaZwelonke
Oko kusenza sibe "ukuhlenga." Emva kokuba i-field evimbayo ibuyisela iJacket yayo iGreen kwi-clubhouse emva konyaka, iqela liphethe "amalungelo okutyelela," oko kuthetha. Ijacket ithathwa njengeyakhe, kwaye xa e tyelela u-Augusta kaZwelonke nganoma yiyiphi na into emva koko, uyakwazi ukuyifumana kwaye ayigqoke ibhatyi yakhe. Kodwa ibhatyi ayivunyelwe ukushiya isakhiwo seSizwe sase-Augusta.
Iwebhusayithi esemthethweni ye-Masters, iMasters.com, ichaza ngokuthe kancinci indlela ijokethi ehambelana ngayo ne-golfer:
Ephantse ekupheleni kweMasters, iipokethi ezikhethiweyo ezinokuthi zilungele ukuphumelela ngethuba lomcimbi. Umninimzi uya kuba nemilinganiselo yakhe ethathwe kwiClubs Golf Club okanye anganikezela imilinganiselo ukwenzela ukuba isiko senziwe iGreen Jacket sinokulungiswa. Ngokuqhelekileyo, umqhubi omninzi uya kuba neJacket enye kuphela ngaphandle kokuba ubukhulu bayo buguquke. "
Uninzi lwee-champs zimbethe ijeketi yazo ngexesha lokubuyela kwi-clubhouse; umzekelo, ngexesha leMigqibelo yeeMidlalo zonyaka.
Kule minyaka, kuphela iincwadana zeGreen Jackets eziphumeleleyo "zisindile" izizathu ze-Augusta National. Nangona kunjalo, ezinye iinqununu zamaMasters ziye zineempapu ezenziwe ngokuzenzekelayo ukwenzela ukuba umntu abe nokugcina kwaye ujabule unyaka wonke ngelixa iqela lihlala kwiqela.
Omnye umqulu weGreen ukuba iClubs ikwazi ukuyeka
Kukho umqhubi omnye womqhubi oye waphumula ngokugcina iJacket yakhe yasekuqaleni, kodwa. Xa uGary uMdlali ephumelela uMasters ka-1961, waba ngumqhubi wokuqala welizwe. Wayithatha ibhattshi ekhaya, walibeka kwiplastiki, ikhuselo elikhuselekileyo kwaye walixhoma kwikhempi.
Xa uMdlali ebuyela ku-Augusta kaZwelonke ngo-1962, wayekhohliwe ukubuyisela ibhatyi. Kwakungemva kokuba uMdlali ebuyele ekhaya eMzantsi Afrika ukuba umlawuli welizwe lika-Augusta uClafford Roberts uqaphele ukuba ibhatyi likaMdlali alikho kwi-clubhouse. Wabiza uMdlali.
Ndathi, 'Ewe, ufike uze ulithathe,' "uMdlali wathi kuRoberts, utshele i- New York Times . URoberts uhleka, njengokungathi wayengafumani ijacket, wambiza uMdlali, "... kuyo yonke into ebalulekileyo, nceda ungayinxibe ebantwini." "U
Umdlali usenaloo jekethi ekhaya, kodwa akazange alinxibe kuluntu.
Kutheni iinqununu zamaMasters zinikezela "iJack Jacket"?
Yiyiphi i-golfer eyona yokuqala yokufumana iJacket yaseGreen?
Yonke NgoMculo waseJamaican
Amanqaku alula ngesiNgesi
Mandarin Chinese Hotel Isigama